Bangladesh : Teratany Sa Tsy Teratany, Izany No Fanontaniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2011 9:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, Aymara, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Zon'ny Teratany.
Saiky ny 98% ny mponin'i Bangladesh dia Bengalis avokoa ary miteny ny teny Bangla. Ny ambiny no ahitàna Chakmas, Khasi, Santhal ary foko hafa miisa maherin'ny iray tapitrisa (eo ho eo amin'ny 1,2% ny fitambaran'ny mponina) izay miaina any an-tendrombohitra ny ankamaroany. Chakmas dia firaisana foko Tibetana-Birmana, ary tena mifanakaiky amin'ny foko Himalaiyana. Araka ny tantara, avy any Arakan izy ireo (izay faritra Rakhine ao Birmania ankehitriny) izay zato taona taloha, mpifindrafindra monina ary nitoetra tamin'ny farita samihafan'i India sy Bangladesh.
Volana vitsivitsy izay, olona teratany Bangladeshi maro no nidina an-dalambe hanao fihaonana, rojon'olonmbelona sy fifamoriana, mitaky ny fankatoavan'ny lalàmpanorenana ny mponina any amin'izy ireo. Ny adihevitra momba ny hoe ‘Teratany’ dia niainga avy amin'ny fanamarihana maro nataonà komity manokana iray ao amin'ny parlemanta, izay miasa mamolavola fanitsiana ny lalàmpanorenana hiverina amin'ny lalàmpanorenan'ny taona 1972. Tsy misy ny famaritàna ny foko na teratany tamin'ny lalàmpanorenana voalohan'i Bangladesh ny taona 1972 izay tsy misy filazàna mihitsy fa hoe i Bangladesh dia tany ho an'ny Bengalis.
Ilay komity ao amin'ny parlemanta dia nilaza fa hangataka ny hanekena azy ireo ho toy ny “foko vitsy an'isa” ary nanontany: “Ny Bangalees [Bengalis] ve ho antsoina hoe ‘mpitsabaka’ na ‘mpanani-bohitra’ raha ny foko rehetra hatao hoe adivasi (teratany)” ?
Nangataka ny fanekena azy ireo ho “olona teratany” araka ny lalàmpanorenana ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonin'ny teratany fa tsy hoe foko na "vondron'olona vitsy an'isa” ao afovoan'i Shahidminara ao Dhaka, Bangladesh. Sarin'i Abu Ala, Copyright Demotix, ny 29 Aprily 2011.
Ny minisi-panjakana misahana ny raharaha ara-kolotsaina, Pramod Mankin, dia nilaza :
“Tsy misy resaka mihitsy ny hanomezana fankatoavana araka ny lalàmpanorenana ho an'ny mponina teratany. Ny adihevitra dia ny hoe fomba ahoana no hanekena azy ireo.”
“Ny governemanta dia mbola misalasala ny hanekena na tsia ny mponina teratany ho “teratany” satria maha-velompanontaniana momba ny fototra niavian'ny foko Bangalees eo amin'ny firenena izy ity..”
Monjurul Haque, tao amin'ny bilaogy Teratany Bangla dia manoratra [bn] ny momba ny fahasarotan'ny zava-misy :
Milaza ny manampahefana – “Ny mponina any an-tendrombohitra dia tsy teratany. Satria ny lalàmpanorenana Bangladesh mihatra na aiza na aiza, mitovy zo ny Bengalis amin'ireo tany any an-tendrombohitra.” Ny mponina any an-tendrombohitra dia olom-pirenen'i Bangladesh koa (fa tsy teratany) – Ampahatsiahivin'ny lalàmpanorenana koa izany. Mandefa voanjo Bengalis sahirana hipetraka any an-tendrombohitra ry zareo noho ny antony hoe “ ny Chakmas nitrandraka ny tany teo an-tendrombohitra hatrany amin'izay niaviany – faritr'i Arakan ao Birmania, noho izany dia voanjo koa izy ireo”.
Lazaina eto koa fa ny foko any Bangladesh dia niharan'ny fanitsakitsahana zon'olombelona nandritra ny fotoana ela nataon”ny voanjo Bengalis.
Ny Foko teratanin'i Bangladesh eny amin'ny lalankelin'ny havoanan'i Chittagong. Sary an'i Anwar Hussain. Copyright Demotix 7/8/2010.
Shimon Baskey dia milaza [bn] izay zavatra heverin'ireo mponina any an-tendrombohitra
Hatry ny ela ny tenintsika, kolotsaina, finoana ary fomba amam-panao dia mitovy, tsy nisy niova. Mponin'ity tany ity isika. Ireo razantsika tsy nonina tamin'ny tanin'olon-kafa na nipetraka tany aman'olona. Izy ireo no mponina voalohany nitevy ny ala ary namolavola ny tany ho azo volena. Efa taranaka maro ry zareo no niaina teo talohan'ny namaritana ny sisintany.
Sarkar Amin dia manaiky [bn] ny toerana saro-pady misy ireo olona ireo:
Mong Mong, Tany amin'ny havoana iray tany Bandarban no nahitako anao voalohany. Bengali aho ary ianao dia avy aminà foko iray. Mpanao hosodoko ianao ary izaho poeta. Lasa mpinamana niaraka tamin'izay isika. Nisy hirifiry lalina ve tao anatin'ny tsiky tsy manan-tsininao? [..]
Misy olana. Ny olona any an-tendrombohitra dia mitaky lalàmpanorenana manaiky ny vahoakany. Takian'izy ireo ny ho antsoinahoe “teratany”. Mitaky fametrahana fifanaraham-pilaminana ry-zareo. Nefa ireo mpanapaka an'i Bangladesh dia tsy mila fankatoavana ny fitovian-jo ho an'ny mponina any an-tendrombohitra. Izany no fototry ny jaly sy ny olana.
Jewel Bin Jahir dia mampahatsiahy [bn] ny fahatsapan-ireo teratany vitsy an'isa raha toa ny teniny, kolotsaina ary ny finoana no tsy raharahaina ao anaty lalàmpanorenana :
Sary nindramina tamin'ny Wikipedia. Nampiasaina araka ny fahazoan-dàlana CC
Tsy niezaka ny hanaporofo ny fahambonianay tamin'ny Biju, Baisu, Karam Wanna, Sohrai (fety sy fomba fanao) anay izahay. Tsy niezaka ny hanery ny hanajàna ny Sangsarek, Laleng, Sharna ho finoana fototra na tamin'iza na tamin'iza izahay. Tsy niezaka ny handentika ireo teny hafa teto amin'izao tontolo izao amin'ny teny Achik, chakma, Kokborok, Thar, Munda, Santali izahay.
Nefa mbola nalàna tamintsika ny Haba-Zoom(tanimboly) antsika, ala sy lakandrano. Odian-tsy hita ny tenindrenintsika. Tasaina ho tsy madio intsony ny finoantsika, tsy mitombina noho ny amin'ireo finoana goavana sy manindry.
Lasa lavitra ny adihevitra rehefa niteny ny minisitry ny raharaham-bahiny ao Bangladesh nitsikera tsy ela akory izay fa hoe tsy mendrika ny olona miaina any an-tendrombohitra any Bangladesh ny teny hoe “teratany” :
“Ao amin'ny lalàmpanorenana, ny vitsy an'isa rehetra dia ekena fa vitsy an'isa, ary araka ny fanovàna faha 15, dia heverin'ny governemanta ankehitriny ho toy ny ‘foko vitsy an'isa’ izy ireo ary fa tsy hoe fotsiny olona anaty ‘foko’.”
Nilaza koa Izy :
“Ny fanomezana maha-izy azy manokana sy tombontsoa ambonimbony ho fanafahana 1,2 isan-jato monja amin'ny vahoaka miisa 150 tapitrisa amin'ny fanafoanana ny an'ireo 98,8 isan-jato dia tsy ho tombontsoam-pirenena ho an'i Bangladesh.”
Nampahatsiahy ny fanaon'ny Bengalis efa hatramin'ny 4000 taona tamin'ity tany ity izy :
“Ny foko Bengalis dia sady tsy voanjo mpanjanaka, na koa tsy vahiny no tsy teratany ho an'ity taniny ity ary tsy ho izany mandrakizay.”
Biplob Rahman, mpanao gazety sady bilaogera dia manohitra [bn] ny fijoroan'ny governemanta fa tsy misy teratany izany any Bangladesh. Mitanisa ny famakiana lainga vao haingana [bn] avy amin'ny Mpanjaka Chakma sy mpikambana ao amin'ny sehatra fifampiresahan'ny UN momba Ireo Taranaka Teratany ary Debashish Roy izy :
Raha eken'ny governemanta ny “mponina teratany” dia hanana fototra ara-dalàna amin'ny ady fitakian-jo ataony ireo olona 1.2% n'ny mponina natao an-jorom-bàla sy zàra raha nahita fandrosoana ireo. Kanefa, io fankatoavana io dia tsy hanome azy ireo zo manokana.
Biplob mampahatsiahy fa ny Praiminisitra Sheikh Hasina ankehitriny, dia nanao fanambaràna tamin'ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Mponina Teratany namaritra imbetsaka an'ireo olona any an-tampon-kavoana ireo ho “mponina teratany”.
Naka teny taminà gazety iray ao an-toerana izy [bn], izay nitatitra [bn] fa :
Fantatra izany fa raha ampiasaina ny “teny teratany” ho an'ny mponina vitsy an'isa sasany dia nametraka izany fa ny firenena dia tokony hanasonia fanambarana maron'ny Firenena Mikambana. Amin'izay fotoana izay ny Firenena Mikambana dia ho afaka hanao fanadihadihana momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tamin'ireo mponina teratany ireo. Noho izany, ny governemanta ao Bangladesh dia naka ity safidy ity (tsy hiantso azy ireo ho “teratany”). Amin'ity olana ity, ny ankabeazan'ireo antoko politika lehibe sy matanjaka any Bangladesh dia mitovy foto-kevitra.
Mithusilak Murmu manamarika [bn] fa amin'izao fotoana dia misy karazana fetra ao amin'ny sampan-draharahan'ny Governermanta sy ny sampam-pampianarana miankina amin'ny fanjakana ho an'ireo teratany ary manontany tena izy raha ny tolo-kevitry ny Governemanta amin'izao fotoana io dia hitarika fanovàna amin'ny famoahana ny “taratasy fanamarinana ny maha teratany” ho an'ny mponina any an-tendrombohitra.
Manodidina ny olona teratany 370 tapitrisa aminà firenena 70 manerana izao tontolo izao no mbola atao an-jorom-bàla na ratsy karakara. Ireo olona ireo any Bangladesh sy amin'ny toerana hafa dia miatrika olana mitovy ary miady ho an'ny maha izy azy, tany ary fomba fiaina.